ကိတ် Middleton အိမ်မှာကလေးမွေးဖွားအပေါ်အလေးအနက်ဆိုသည်: အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Duchess လိုအပ်သလဲ?
ကင်းဘရစ်၏ Duchess ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အနေအထားနှင့် ပတ်သက်. တပုဒ်အသစ်သောအချက်အလက်များ၏စာမျက်နှာများပေါ်တွင်နေ့တိုင်း။ စာသား, သူမ၏ပရိသတ်များနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များမှစိတ်ဝင်စားဖို့တတိယကိုယ်ဝန်ရာထူးဂုဏ်ရှိန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသေးဆုံးအသေးစိတ်။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကကိတ် Middleton Kensington နန်းတော်မှာမဟုတ်, ဆေးရုံထဲမှာ, ဇာတိနံရံများအတွက်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကနေထွက်သွားဖို့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်သိရဖြစ်လာသည်။
ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေါ်ဆောင်းပါးက The Daily Mail က၏စာမျက်နှာများတွင်ထင်ရှား။ , သတင်းထောက်များကိတ်သူမကိုမင်းသမီးလေး Charlotte ဝတ်ဆင်တဲ့အခါမှာအိမ်တွင်မွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းပေးဖို့တောင်းကြောင်းထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ထို့နောက်သူမတစ်ဦးအပြားငြင်းဆန်တယ်။ ဒါဟာဒီအချိန်ပလ္လင်တော်မှအမွေခံ၏မယားအဆုံးကိုသွားလိမ့်မယ်လို့ပုံရသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကိတ်နေအိမ်စွန့်ခွာရန်နိုင်အောင်ကြိုးစားသလဲ? ဤလောကသို့တစ်ဦးကလေးထုတ်လုပ်ရန်ဒီနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးသောတိုင်းမိန်းမဗြိတိန်အတွက်လူသိများသည်နှင့်အမျှ£ 3000 ၏ပမာဏအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ ပေမယ့်, ဒီထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးခြေလှမ်းမှကိတ်အားပေးမယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ paparazzi ၏တပြင်လုံးကိုအမှတ်
သူ့သားနဲ့သမီး၏မွေးဖွားခြင်းမင်းသားဝီလျံရဲ့ဇနီးဒါခက်ခဲသည်မဟုတ်, ဘုရင်မကြီးရဲ့အကြီးအ-မြေးပတ်လည်ဖောင်းပွအလွန်ငယ်ရွယ်မိခင်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေပေးထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ paparazzi သူတို့နီးပါးအောက်လွှတ်တော်အတွက်ကိတ်ဖမ်းရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်, ဆေးရုံအနီးတွင်တာဝန်အပေါ်ခဲ့ကြသည်! အဆိုပါ Duchess နန်းတော်၌ဆက်နေရန်လိုသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် "အပိုဆု" - ကလေးတွေ chat ။ မင်းသားဂျော့ခ်ျနှင့်မင်းသမီး Charlotte သူ၏အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးနာရီအတွင်းမွေးကင်းစ provedyvat ပါလိမ့်မယ်။
အဲလစ်ဇဘက် II ကိုသူ့ကိုယ်သူဘာကင်ဟမ်နန်းတော်မှာဆေးရုံပြင်ပတွင်သည်သူ၏ဆက်ခံလေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ဘုန်းကြီးသောယခင်ဘုရင်မကြီးဗစ်တိုးရီးယား Kensington နန်းတော်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့သာ Aesculapius ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်အာဏာရမိဖုရားစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။
မတ်မတ်ကျွန်း Baldwin ကောင်းသောအရသာမှားယှငျး
ဆုံး "စျေးကြီး" စူပါ Vogue ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပြဿနာချီးမြှောက်ခဲ့
ဖရန့် Donald Trump ရဲ့မဂ္ဂဇင်းက New York Post ကို၏ဇနီးဟောင်းအင်တာဗျူး
ဂျော်နီ Depp ၏ကာကွယ်ရေးအတွက်နှစ်ဆယ်လေးပါးသက်သေခံမည်
ဒါကိုတာဂျွန်ဆင် Estesstvenno ဆံပင်အရောင်ပြန်ရောက်
Ozocerite - အိမ်မှာကိုသုံးပါ
တရုတ် Aster - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ
အမ်မလီ Ratazhkovski "ငါသည်ကြွေးအံ့မခန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသာငါ၏ကိုယ်"
ဂျနီဖာလောရင်အသစ်တစ်ခုအမှတ်တံဆိပ် Dior ခရုဇ်စုဆောင်းခြင်း advertising ထင်ရှားခဲ့ပါသည်
ဖန်လုံအိမ် polycarbonate အတွက်ခရမ်းချဉ်သီးကိုတက်ချည်နှောင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မှိုပိုင် - အရသာမှိုပိုင်၏အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ 7
Ostend, ဘယ်လ်ဂျီယံ - ဆွဲဆောင်မှုများ
ရုံထောင့်ပတ်လည်မှာ Iglesias နှင့် Kournikova မင်္ဂလာဆောင်,